Kudzoreredza UNWTO kubva kuMadrid kuenda kuRiyadh zvisimbiso United States yeHurumende
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Hurumende Nhau » Kudzoreredza UNWTO kubva kuMadrid kuenda kuRiyadh zvisimbiso United States yeHurumende
Nhau Nhau • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Hurumende Nhau • nhau • vanhu • Saudi Arabia Kuputsa Nhau • Spain Kuputsa Nhau • ushanyi • Tourism Kutaura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Trending Now • Akasiyana Nhau
Pachave neramangwana idzva rekushanya. Iyi itsva mangwana, kana vamwe vachiti izvo zvitsva zvinogona kunge zvatotanga. Zvinoita sekunge Saudi Arabia inobuda semunhu anofungisisa uye mutungamiri.
Saudi Arabia iri kubuda senge hofori nyowani yeiyo yepasirese yekufambisa uye yekushambadzira indasitiri ichichenesa inotungamira mazita ezita uye zvikamu zvehutungamiriri hwekushanya pamwechete.
Kufambisa iyo UNWTO Headquarter kubva kuMadrid kuenda kuRiadh ingadai iri danho rakashinga zvikuru rakamboitwa, uye Saudi Arabia inoita kunge yakatsunga.
Saudi Arabia inogona kuve nemukana wekutungamira kushanya kuchikamu chinotevera mushure me COVID, Panguva imwechete iyo Humambo zvakare ine mukana wekugadzirisa zvimwe zvakashata muhurongwa hwesarudzo hweUNWTO.
Iyo yekufamba uye yekushanya nyika inoda imwe rubatsiro mukudzoka munzira. Muchimiro chepasi rose, iyo World Kufamba uye Tourism Council (WTTC) iri kumiririra nhengo dzinogadzira kwazvo uye dzine simba muindasitiri yekushanya yakazvimirira uye yekushanya. Izvo zvakakosha kuti WTTC ikwanise kutaurirana uye kubatana pamwe neruzhinji chikamu. Chikamu cheveruzhinji chinomiririrwa nesangano rakabatana reUN, iyo World Tourism Sangano (UNWTO).
Sezvo Secretary General weUNWTO Zurab Pololikashvilhis akatora chigaro kuUNWTO, iyo World Tourism Organisation yakava agency ine zvakavanzika zvakawanda, kusanganisira kubviswa kuWTTC.
Saudi Arabia inoiwana. Humambo hune mari uye pesvedzero yekuisa hutsva pamwe chete uye kugadzirisa ramangwana rekushanya kwenyika.
China yakaedza izvi mushure meUNWTO General Assembly kuChengdu, apo Zurab yakavhoterwa musimba. China yakaumba iyo World Tourism Mubatanidzwa. Iri sangano zvakadaro harina kubvira rasimuka.
Nyika yepasi rose yekushanya iri mukutambudzika. Bhizinesi rega rega, nyika dzese dziri kurwira kupona kwayo munguva dzedenda. Nepo vazhinji vari kudzikisira pamari zhinji, Saudi Arabia iri kushandisa mari mukushanya senge hapana nyika yakambokwanisa kuita: Mabhirioni nemabhiriyoni emadhora.
Gurukota rezvekushanyirwa, Ahmed Al-Khateeb, akaonekwa achifamba nyika zvine mutsindo uye achigara aine boka guru revarairidzi.
Zvingangodaro kuti aive nehukama neakawanda zvakanyanya, uye nekureba zvakanyanya kupfuura UNWTO Secretary General. Iwo mamiriri eSaudi anogara ari nyeredzi pazviitiko zvese.
Muna Kubvumbi gore rino, WTTC yakakwanisa kubvisa musangano wekutanga wepasirese mushure me COVID-19 nekubatanidza nyika yekushanya muCancun, Mexico.
Nerubatsiro diki kubva kuSaudi Arabia inomiririrwa naHEAhmed Al Khateeb, gurukota rekushanyirwa kwehumambo, dzimwe nhume dzinopinda WTTC Global Summit akaenda kumba aine girazi retariro mushure mekusangana negurukota reSaudi. Ainzi nyeredzi inopenya yekushanya kwenyika.
Vhiki mbiri mushure memusangano unobudirira weWTTC, CEO weWTTC nemubati wemusangano, aimbova gurukota rezvekushanya kuMexico, Gloria Guevara, akazivisa, achaenda kuSaudi Arabia muna Chikunguru kuzova chipangamazano kugurukota rekushanyirwa kweSaudi.
Mune mamwe mazwi mushumiri weSaudi just wakatora mukadzi ane mukurumbira mukushanya semupangamazano wake. Gloria ave muRiyadh achishandira Hurumende yeSaudi.
Gurukota reSaudi panguva iyoyo vakati: "Tine nhaka yenyika yakasimba uye zviuru zvezviitiko zvakasiyana zvekutaurwa. Gloria anounza hunyanzvi hwepasi rose uye hukuru hwepasi rose kubva panguva yake achimiririra nyika yese yekushanya uye yekufambisa seye CEO weWTTC uye ruzivo rwakananga nekushandura indasitiri yekushanya kubva panguva yake saMunyori weKushanya muMexico, izvo zvichatibatsira isu -kuwedzera mari mukushanya inoenda padanho rinotevera. "
Gurukota rakarurama. Gloria haasi ega munharaunda yake nyowani. Nzvimbo yenharaunda yeWTTC yakavhurwa sechipo neSaudi Ministry of Tourism.
Zvakare iyo World Tourism Organisation (UNWTO) yakagadzwa hofisi yemudunhu muRiadh, kutsigira kukura kwechikamu chekushanya cheMiddle East sezvo ichipora kubva kuchirwere checoronavirus.
Ihofisi inovhara nyika gumi nenhatu mudunhu iri uye inoshanda senzvimbo yekuvaka kukura kwenguva refu kwechikamu ichi nekusimudzira hupfumi hwevanhu munzvimbo yekufamba neyekushanya mudunhu iri.
Ihofisi iyi inosanganisira yakazvipira Statistics Center ine chinangwa chekuva chinzvimbo chinotungamira pane ekushomeka manhamba enharaunda.
Nhanho yekupedzisira iri mukugadzira zvinoenderana nekuvimbika eTurboNews Zvitubu.
Iri kufambisa iyo World Tourism Organisation kubva kuSpain kuenda kuSaudi Arabia.
Sangano rakabatana reUN ranga riri muMadrid, Spain kubva payakaumbwa munaNovember 1, 1975. Izvi zvakapa Spain chigaro chenguva dzose uye simba rekuvhota muExecutive Council, bazi rinotonga reWorld Tourism Organisation.
Kudzosera UNWTO kuSaudi Arabia raizove danho rakakura uye shanduko yakakosha yekushanya kwepasirese. Izvo zvaizopa Humambo hweSaudi Arabia kwete chete hutungamiriri muiyi indasitiri, asi chinogara chigaro chevakuru kanzuru.
Nhanho yakadai inofanirwa kubvumidzwa neGeneral Assembly yakarongerwa Gumiguru gore rino kuMorocco. Verenga UNWTO General Assembly Morocco: Chakavanzika chisati chaziviswa?
Maererano ne eTurboNews Kwayedza, Hurumende yeSpain yakaratidza kusuwa uye iri kupokana zvakanyanya nedanho rakadai.
Zvinoita sekunge kufamba uku kunogona kunge kwakatorongwa munaGunyana 2017 kuUNWTO General Assembly kuChengdu, China.
UNWTO General Gungano 2017
Inogona kutsanangura kuti sei Saudi Arabia yakatsigira Zurab Pololikashvil musarudzo yake isina mubvunzo muChina, uye nesarudzo yake yekumisazve muna Ndira gore rino yeUNWTO SG inopikisana nemumiriri kubva Bhahareni, HE Mai Al Khalifa .
Vaviri vaimbova Secretary General General, Dr. Taleb Rifai naFrancesco Frangialli vakapokana nenzira yakaitwa sarudzo iyi. Vakanyora tsamba yakavhurika vachidaidzira kudzoreredza decenct musarudzo yeUNWTO . Iyi yekutsigira chirongwa yaive chirongwa chakaitwa ne World Tourism Network, rakazvimirira sangano nevatungamiriri vevashanyi munyika zana nemakumi manomwe nenomwe, uye raive nesiginecha yevatungamiriri vazhinji.
Aimbove Munyori Mukuru weUNWTO uye aimbova CEO WTTC Prof. Geoffrey Lipman. Louis d'Amore, muvambi uye mutungamiri wenyika International Institute for Runyararo Kuburikidza neKushanya (IIPT), uye Juergen Steinmetz, sachigaro weachangobva kusimbiswa World Tourism Network vakasaina zita ravo vachitsigira tsamba.
Kuita kweUNWTO mukushanya kwepasirese kwakabvunzwa kuseri kwechiitiko nevazhinji.
Maererano ne eTurboNews masosi, nyika dzaive dzichisvika kuSaudi Arabia kuti dzibatsirwe.
Iko kune kuri kuwedzera nzvimbo yekutandarira chivakwa chekutsigira kutamisa UNWTO kuenda kuSaudi Arabia. Humambo hwave hwakagamuchirwa kwazvo shamwari uye shamwari kune iyo indasitiri kana ichifambisa kuburikidza zvisingaite matambudziko kumatunhu mazhinji.
Zvisinei manzwi ekupikisa ari kuti izvi zvaizopa Saudi Arabia kutonga kwakanyanya, vamwe vari kutaura nezvenyaya dzekodzero dzevanhu nekuenzana muhumambo.
UNWTO General Assembly inoda kubvumidza kurudziro neUNWTO Executive Council muna Ndira kuti isimbise Zurab Pololikashvilhis kwetemu yechipiri.
Saudi Arabia iri kuvhura musuwo wekuunza nyika yekushanyirana pamwechete. Zvinogona gadzirisa zvimwe zvisirizvo, uye gadzira nzira yeiyo post COVID-19 indasitiri yekushanya mune ramangwana.
eTurboNews yakasvika kuna UNWTO SG Special Advisor Anita Mendiratta uye kuna Marcelo Risi, Director wezvekutaurirana, World Tourism Organisation. Pakanga pasina mhinduro.